Masar iyo Sudan oo dalab cusub kasoo saaray khilaafka kala dhaxeeya ITOOBIYA - Caasimada Online
Home Dunida Masar iyo Sudan oo dalab cusub kasoo saaray khilaafka kala dhaxeeya ITOOBIYA
Masar iyo Sudan oo dalab cusub kasoo saaray khilaafka kala dhaxeeya ITOOBIYA
Qahira (Caasimada Online) – Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ugu baaqay dowlada Ethiopia in sida ugu dhaqsaha badan ay wada-hadal dhab ah ka yeeshan xiisada biyo xireenka Webiga Nile-ka, oo mudo badan soo jiitameysay.
Dalabkaan ayaa imanaya kadib kulan Qaahira ku dhex-maray Wasiirada arrimaha dibedda ee Masar iyo Suudaan, kuwaasi oo isla gartay muhiimada ay leedahay in lasii wado wada-xaajood horseeda danaha saddexda wadan.
War-murtiyeed ay si wada-jir ah u soo saareen Wasiirada arrimaha dibedda ee Masar iyo Suudaan ayaa lagu sheegay in lagama maarman tahay in heshiis sharci ah laga gaaro xiisadaas.
“Muhiimad gaar ah ayey leedahay isku daba-ridka mowqifyada xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ee ku aadan arrimaha mandiqada iyo caalamka, gaar ahaan caqabadaha hortaagan labada waddan,” ayaa lagu yiri qeyb kamid ah war-murtiyeedkaas.
Dowladda Masar ayaa hore si adag uga hortimid go’aanka ay Ethiopia ee howl-galinta biyo-xireenkeeda, midaasi oo ay ku tilmaamtay mid jabinaya is-afgaradkii hore ay u wada-gaareen dhinacyada.
Saddexdaan dal ayaa dhowr jeer ku fashilmay inay si wada-jir ah xal uga gaaran xiisada Webiga Nile-ka, ayada oo Ethiopia ay ku madax adeygayso go’aankeeda, tan iyo markaasna waxaa xulafeysi gaar ah yeeshay Masar iyo Suudaan.
Arrintan u weyn ee xudunta u ah murankaan sanadaha badan soo jiitamayay ayaa ah in biyo xireenka Ethiopia uu sababo hoos u dhac ku yimaada biyaha ay labada wadan ee kale ka helaan Webiga.
Si kastaba, Dalabkaan cusub ee Masar iyo Suudaan ay u jeediyeen Ethiopia ayaa la ogeyn qaabka ay uga jawaabi doonto Ethiopia, xili uu kal hore Abiy Axmed daah-furay mashruuc cusub oo dalkiisa dabka looga dhalinayo biyo xireenka